WMS ဂိမ်းကစားခြင်းကနေ Amazon ကဘုရင်မတစ်ဦးဂန္ဖြစ်ပါသည် 20 အချို့သောစစ်မှန်သောအေးမြ features တွေနှင့်အတူ payline slot ပါ. stacked Wild ကျိန်းသေသူတို့ထဲကတစျခုဖွစျသညျ. ထိုအခါဆုကြေးငွေလှည့်ခြင်းများသင်တစ်ဦးကြောက်မက်ဘွယ်ဆင်းသက်နိုင် 100 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. ရိုင်းလှည့်လည်သင်ပိုက်ဆံအချို့ကိုကြီးမားတဲ့ပမာဏအနိုင်ရကူညီအခမဲ့လှည့်ခြင်းများစဉ်အတွင်းအသက်ဝင်. ဒါကြောင့်, ပိုက်ဆံအချို့ကိုကြီးမားတဲ့ပမာဏအနိုင်ရမှအခွင့်အလမ်းများအတွက် WMS ကနေဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာ slot ကဂိမ်းထဲမှာတဲ့ Amazons ၏ဘုရင်မကြီး join. ဒီ slot ကအထူးသဖြင့်သူတို့အားကြီးမားသောအနိုင်ပေးလိုက်သူတို့အားကစားသမားများအတွက်လုပ်.
အမေဇုံဘုရင်မကြီးမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှ ported ခံရဂန္ WMS လောင်းကစားရုံ slot ကဂိမ်းများ၏စာရင်းအတွက်အခြားဂိမ်းပူးပေါင်းမည်. ဒီ WMS slot နှစ်ခု၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ၏တဦးတည်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုသည်, Williams က Interactive မှ. ဘုရင်မကြီးသူ့ကိုယ်သူဂိမ်းထဲမှာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်နှင့်အခြားဂရပ်ဖစ်အသေးစိတ်ကိုဂိမ်းများ၏အရည်အသွေးမှထည့်ပါ.
သငျသညျ slot ကဂိမ်းတွေအများကြီးဆင်တူသောတိုင်းလှည့်ဖျားအတွက်£မှ 60 20p အကြားဘယ်နေရာမှာမဆိုအလောင်းအစားနိုင်.
အမေဇုံဘုရင်မကြီးရဲ့ USP ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများကစားဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်. လက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှလက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှလက်ျာဘက်၌ရန် i.e အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လက်ျာဘက်၌. ဒါ့အပြင် stacked Wild ၏ဂိမ်းဝါကြွားတတ်သင်ပိုက်ဆံ၏အတော်လေးတွေအများကြီးအနိုင်ရကူညီနိုင်သည့်ဆင်းသက် feature. ရိုင်း ( ထိုရေတံခွန်သင်္ကေတ) အရက်ကြောင့်မှားယွင်းပေါ်2သို့မဟုတ်ရက်ကြောင့်မှားယွင်း3သို့မဟုတ်ရက်ကြောင့်မှားယွင်း4သင်အနိုင်ရပေါင်းစပ်ဆင်းသက်ကူညီပေးရန်အမေဇုံဘုရင်မသင်္ကေတများ မှလွဲ. အပေါငျးတို့သညျအခွားသင်္ကေတများအစားထိုး.
အမေဇုံဘုရင်မသင်္ကေတဒီဂိမ်းထဲမှာကြဲဖြန့်သင်္ကေတဖြစ်ပါသည်. အဖြစ်ကမျက်စိထုတ် Keep3ထက်သို့မဟုတ် ပို. ပင်3ဒါကြောင့်အချို့သောအံ့သြဖွယ်အခမဲ့လှည့်ဖျားကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်အဖြစ်အမေဇုံမိဖုရား. ဘယ်နှစ်ယောက်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများကိုသင်အလိုတော်အရအမေဇုံဘုရင်မသင်္ကေတပုံပေါ်ပုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမူတည်.3သင်္ကေတအနေဖြင့်သင်တဆယ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအနိုင်ရ4သငျသညျအနိုင်ရ 25 နှင့်5ကြီးမားသောအတွက်ရလဒ်တွေကိုကြဲဖြန် 100 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများဆုကြေးငွေ. အဆိုပါ 10 နှင့် 25 အခမဲ့လှည့်ဖျားဆုကြေးငွေအစဉ်ရဖို့အတော်လေးလွယ်ကူပါတယ် 100 သင့်ရဲ့အခြမ်းကနေသည်းခံခြင်းတစ်နည်းနည်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်.
အဆိုပါအခမဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့ retriggered နှင့်လုံးဝနီးပါးန့်အသတ်ရှိပါတယ်နိုင်ပါတယ် spins. ဒီဂိမ်းကိုနောက်ထပ်အေးမြအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်ဖြစ်ပါသည်.
အမေဇုံဘုရင်မကြီး WMS နေတဲ့စူပါထိခိုက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါအနိုင်ပေးကြီးမားသောဖြစ်ကြပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်းကိုယ်တိုင်ကကစားရန်. ရယူ3ကပ်လျက်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါ် Gorilla နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဘုရင်မကြီးသူ့ကိုယ်သူကဲ့သို့ကြွယ်ဝသောဖြစ်ခြင်းကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ. သည်းခံခြင်းဒီဂိမ်းရန်သော့ချက်, ကောင်လေးတစ်ယောက်ထိုကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ်လမ်းအတွက်ဒီဂိမ်းဆုလာဘ်သည်းခံခြင်းစေ. ဒါကြောင့်, တောတွင်း၌ဤစွန့်စားမှုလက်လွတ်မ.